ShweMinThar: Apple iPhone XS : A Luxurious Experience
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်ကျော်ကစပြီး အခု ၁၀ရက်ကျော်လောက်ကို iPhone XS က Primary ဖုန်းအနေနဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော Android သုံးနေကြကနေ iPhone ကို တော်တော်လေးအချိန်တော်တော်ကြာကြာ Review လုပ်သလောက်တင်မဟုတ်ဘဲ သုံးဖြစ်တာဆိုတော့ ခံစားမိတာတချို့ကို ပြောသွားပါမယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Review လို့ ပြောလို့ရချင်ရမယ်... ဒါပေမယ့် ဒီနေရာအဓိကပြောသွားမှာက iPhone XS ဆိုတဲ့ဖုန်းကို သုံးရတဲ့ Feeling ဒါမှမဟုတ် User Experience... ဒါကလွဲပြီး ကျန်တာကို အဓိကထားသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မစခင်မှာ တကယ်လို့ iOS 12 နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျန်ခဲ့တာ၊ မှားတာရှိရင် ထောက်ပေးပါ။ As this is kinda our first iPhone article.
အရင်က သတိထားမိမှာပါ။ Tech Gadget က iPhone ကို ရှိတယ်လို့ကို သဘောမထားတဲ့အဆင့်မှာရှိနေတာ :3
ဒါကလည်း Android တွေကို အဓိကထားနေတာနဲ့ အခုအချိန်အထိ Android ဖုန်းတစ်ခုနဲ့ iPhone နဲ့ကို နှိုင်းယှဉ်ဖို့ကို စိတ်မပါလို့ပါ။ Latest iPhone တိုင်းက တကယ်ကို iOS ကို သုံးနေပြီး Ecosystem တစ်ခုထဲရောက်နေတယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့ ဝယ်သင့်တဲ့ဖုန်းတွေပါ - ဒါက ပြောနေစရာကိုမလိုတာ၊ ရွေးချယ်စရာလည်း မရှိဆိုတော့...။ ဒါပေမယ့် Android ကိုင်နေကြသူတစ်ယောက် iPhone XS ကို Primary သုံးဖြစ်လာတော့လည်း ရေးစရာပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
စစခြင်း iPhone XS Max မဟုတ်တဲ့ သာမန် iPhone XS Design က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က iPhone X နဲ့ တူတူပါပဲ။ အဲ့တော့ One Hand Feeling တော်တေ်ာကောင်းတယ်၊ သုံးထားတဲ့ Stainless Steel Frame နဲ့ Glass Body က ဘယ်လိုမျိုးပဲကိုင်ကိုင် တကယ်ကို Premium Feeling ရတယ်။ Hefty ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ဘက်ရောက်တဲ့ Weight တစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့တော့ iPhone X တုန်းက ဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ ဒီအရွယ်ဖုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရှိသင့်တယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ အလေးချိန်တစ်ခုရှိတယ်ဘက်ရောက်သွားတယ်... ပုံမှန် စမတ်ဖုန်းတစ်ခုအတွက်ကတော့ ဒါက မကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် iPhone XS မှာ သုံးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ Quality ကြောင့် ဒါက ပိုပြီ Premium ဖြစ်တဲ့ဆီရောက်သွားတယ်။
ဒါပေမယ့် iPhone XS က Premium ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ That Gold Color :3
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ရွှေရောင်ကို မကြိုက်ပါဘူး။ မကြိုက်တာမှ မုန်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အထိ မကြိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် iPhone XS ရဲ့ ရွှေရောင်က တကယ်ကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကြိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကို ပိုမိခဲ့တဲ့အရောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘေးဘက်ဘောင်အနားစွန်းတွေကို ကြည့်ရင် တချို့ Lighting တွေမှာ တကယ့် မှန်သားတွေကို ထပ်ထားသလိုမျိုး Layer အလိုက်မြင်နေရတာက တကယ့် Attention to Details ဆိုတာကို လက်မခံလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားသလို ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း iPhone XS ကို Premium ထက်ပိုတဲ့ Luxury Device တစ်ခုလို့ ပြောရင်တောင် ပြောလို့ရသွားပါတယ်။ This is Hands Down Most Well Built Smartphone Ever!
ဒါပေမယ့် မကြိုက်တဲ့အချက်ကရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ ဖုန်းရဲ့ အောက်ဖက်က Speaker Grills နဲ့ Mic ပါ။ အရင်တုန်းက iPhone တွေမှာ ဘယ် ၊ ညာ Consistent ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် iPhone XS မှာ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘယ်ဘက်က Mic က ၃ ပေါက်၊ ညာဘက်က Speaker က ၆ ပေါက်.. Mic ဘေးမှာလည်း Antenna Line က ရှိနေသေး။ တော်တော်လေးကို Symmetrical မဖြစ်တာပါ။ အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ တော်တော်လေးကို မကြိုက်... နောက်ပြီး Camera Bump ကလည်း iPhone X လိုမျိုးပဲဆိုတော့ ချထားရင် လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် iPhone XS က One Hand ကိုင်သုံးဖို့... ပြောရရင် ကိုင်သုံးဖို့ထက် ကိုင်နေရတာနဲ့တင် ဒီဖုန်းက Premium ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ခံစားနေရတဲ့ဖုန်းတစ်ခုပါ။ ဒါက ယှဉ်မယ်ဆိုရင် Metal ကို Polycarbonate Plastic Coating အုပ်ထားတဲ့ Pixel2လိုဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ဆီနဲ့ရေ ကွာပါတယ်။ This is built to be IMPRESSED.
ဆိုတော့ကာ... Design နဲ့ Build Quality အရတော့ iPhone XS က အကောင်းဘက်အမြင်ခံရတယ်... ဒါက တကယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာလည်း ဆက်ပြီး တူညီတဲ့ခံစားမှုဖြစ်လာပါတယ်။
Well, iPhone XS is Fast Phone. And more on that, it's smooth phone too. That is it.
Apple iPhone တစ်ခုကို Benchmark သွင်းပြီး OS လုံးဝမတူတဲ့ Android ဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်တာက တော်တော်ကို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ အရူးထတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ - ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ပါဘူး။ Benchmark App တောင် မသွင်းပါဘူး။
ကျွန်တေ်ာတို့အတွက် iPhone XS က ဘာပဲလုပ်လုပ် မြန်တယ်၊ ဘယ်လိုသုံးသုံး လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်မပိုတဲ့ ဖုန်းတစ်ခုပါ။ ဒါက iPhone တိုင်းလားလို့မေးရင်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသော Old Gen iPhone တွေထက် XS က ပိုမြန်သလိုထင်ရတယ်။ So, there is that.
iOS 12 ၊ Apple ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်း Optimized Application တွေ... ဒါတွေက iPhone XS မှာ 7nm A12 Chip မရှိရင်တောင် တခြားမတူတဲ့ OS သုံးဖုန်းတွေထက် ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့အချက်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်သုံးတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ခံစားရတဲ့ Feeling ကိုပဲပြောတာပေါ့။
အရင်ဆုံးက Expectation ကို မှီတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အဆင့်မရောက်တရောက် Feeling ပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က ဒီလောက်ဈေးနဲ့ ဒီလိုဖုန်းတစ်ခုကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် User Experience က တကယ်ကို Top Notch ဖြစ်နေဖို့ပဲမျှော်လင့်မိမှာပါ။ ဒါကလည်း လူအများအတွက် ဖြစ်လောက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက် ထင်သလောက်မဖြစ်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲ? စစခြင်း သုံးတဲ့အချိန်မှာ iPhone XS က Heat ရှိပါတယ်၊ ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင် Galaxy Note9လိုမျိုးပါ.. မဖြစ်သင့်ဘူးထင်နေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အခုအထိ ၁၀ ရက်ကျော် သုံးနေဖြစ်တဲ့အထဲမှာ ၄ ကြိမ်၊ ၅ ကြိမ်ထက်မနည်း Bug ဖြစ်ပါတယ် - လုံးဝ Hang ပြီး Home Screen ကို Force Reset လုပ်ရတာက တစ်ခါပါ။ အဲ့တော့ တခြား App တွေသုံးရတာတွေ၊ Animation တွေက မတရား Smooth ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် Android Pie Stable ကို Pixel2မှာ သုံးတုန်းကတောင် ဒီထက်ပိုပြီး Bug ဖြစ်ခဲ့တာနည်းတယ်လို့ မြင်မိ...
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီတစ်ခါလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အဆုံးသတ်တာပေါ့။ iPhone XS က ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်တယ်ဆိုတာက Design နဲ့ Build Quality မှာ သိသာနေသလို Performance ပိုင်းကလည်း ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်တဲ့ Performance ရှိပါသေးတယ်။
အဲ့တော့ ဘယ်အချက်က Let Down ဖြစ်မလဲ? စလာတာက Battery Life ပါ။
iPhone XS မှာတော့ ဘယ်လောက်မှန်းအတိအကျမသိတဲ့ 3000mAh အောက် Battery တစ်ခုပါတယ်။ 7nm Architecture သုံး A12 Processor က ထင်ထားတာထက်တော့ Battery ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုးတာက One Day Battery မဟုတ်သေးသလို Battery ခံတယ်လို့ ခံစားမရတာပါ။
On-Screen Time တွေအသာထားပါ။ ပုံမှန် ၈ နာရီကျော်လောက်က သုံးနေတာက နေ့လည် ၁၂ ကျော်ရင် Battery က 30% ကျော်ရောက်သွားတာတွေ... သုံးနေရင်းနဲ့ Battery က 20% ရောက်ပြီဆိုပြီး Low Power Mode အော်နေတာတွေ... အပြင်သွားတိုင်း Battery ကို အမြဲ Monitor လုပ်နေရတာတွေ... ဒါက တကယ်ကို iPhone X တုန်းကထက် နည်းနည်းပဲ ပိုကောင်းတယ်ကလွဲပြီး အဆိုးဘက်ရောက်နေဆဲပါ။
ဒီနေရာမှာ ဘာကြောင့် မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရနေသလဲ? ကျွန်တော်တို့မှာ ဖြေရှင်းချက် ၂ ခုရှိပါတယ်။
No. 1 - Samsung Galaxy Note9ကို သုံးနေတဲ့အချိန်တုန်းက ဒီလို စိတ်ပူနေရတဲ့ Feeling တစ်ခုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ Battery Capacity က တနေကုန် အားပြန်မသွင်းဖြစ်ရင်တောင် စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာက Safe Feeling တစ်ခုပြန်ရပါတယ်။
No.2 - iOS 12 က Apple ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော OS ဆိုပေမယ့် Android Pie လိုမျိုး Battery ပိုင်းမှာ Adaptive လိုက်လုပ်ပေးတာ၊ Battery Usage ကို ဂရုမစိုက်မိနေရင်တောင် သတိပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ Pixel2တုန်းက Battery နည်းတယ်၊ iPhone XS လောက်မကောင်းဘူး - ဒါပေမယ့် သုံးတဲ့ပုံပေါ်မှုတည်ပြီး Adaptive Battery က တကယ်ထိရောက်တယ်၊ အဲ့အပြင် သူ့ဟာသူ Battery အများကြီး ကျန်နေသေးလည်း တကယ်လို့ကိုယ်က အချိန်တိုအတွင်းမှာ အများကြီးသုံးနေရင် ဘယ်အချိန်မှာ Battery ကုန်လောက်တယ်ဆိုတာကို Noti ပေးပါတယ်။
iPhone XS မှာ ဒါတွေမရှိပါဘူး။ အဲ့တော့ ရလဒ်က Powerbank နဲ့ Lightning Cable က အိတ်ထဲအမြဲတမ်းထည့်သွားနေရပါတယ်။
Battery ပိုင်း အားမရတာက နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်း ဆက်သွားပါတယ်။ Camera ပါ။
First, We Don't GiveaF**k about DxOMark.
XS က ပြီးခဲ့တဲ့ X နဲ့ ယှဉ်ရင် သိသာတဲ့ Improvement တွေရှိလာပါတယ်။ ဒါကလည်း တကယ်ကို ကိုင်ပြီး သုံးလိုက်တာနဲ့ သိသာတဲ့အချက်ပါ။ Point & Shoot မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ XS Camera ကို Galaxy Note9ထက် ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်မှာ Limitations တွေအများကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနေပြီးတော့ Point & Shoot တောင်မှ စိတ်တိုင်းမကျတာတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။
Apple က iPhone XS Camera ကို ပြင်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုပါပဲ... Telephoto Lens နဲ့ Dual Camera Setup ကို Drop လုပ်လိုက်ပါ။ That's notaway for BEST CAMERA.
iPhone X မှာတုန်းက အလင်းရောင်နည်းတဲ့အချိန်မှာ iPhone X က အဝါရောင်ဘက်ကို Color Temperature သမ်းတာကို သတိထားမိမှာပါ။ အခု iPhone XS မှာ ဒါကပိုဆိုးလာပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြောရရင် iPhone တွေက သဘာဝအကျဆုံးဆိုတာကို ယုံဖို့ပိုခက်လာပါတယ်။
ကောင်းတာအရင်ပြောတာပေါ့။ Dynamic Range ပိုင်း သိသိသာသာကို ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ Normal Daylight မှာ Color Science က မတရားကောင်းပါတယ်။ Telephoto Lens ကြောင့်ရတဲ့ 2x Zoom ကလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်သလဲဆိုရင် Details ပိုင်းမှာ မျှော်လင့်ထားသလောက်မရောက်ဘူး၊ တချို့နေရာတွေ အထူးသဖြင့် Indoor တွေမှာ ကျွန်တေ်ာတို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေမထွက်ဘူး။
ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပါ။ ကဲ... ရှင်းရှင်းပဲ ပြောတာပေါ့။
တကယ်လို့ Google Pixel2ကို ကျွန်တော်တို့ မသုံးဖူးဘူး၊ Pixel2မှာ ရိုက်ရတဲ့ Photo Experience နဲ့ Photo Quality တွေကို ကျွန်တော်တို့ မသိခဲ့ဘူးဆိုရင် iPhone XS က လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံး Camera ဖြစ်မှာပါ။ Galaxy Note9ထက်တောင် ပိုကောင်းတာသေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့ Smart HDR ထက် Google ရဲ့ HDR+ က ပိုကောင်းနေသေးသလို Indoor တွေကလည်း Details ကို Pixel2လောက် iPhone XS မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Pixel2ထက် ပိုကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ် - အထူးသဖြင့် အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရရင်ပါ။
ဒါပေမယ့် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်တာက Telephoto Lens ကို စသုံးလိုက်တဲ့နေရာမှာစပါတယ်။ အဲ့ဒီ Aperture f2.4 Secondary Lens ပါ။ Portrait တွေက တခြားသော Telephoto Lens တွေလိုမျိုးပဲ အလင်းရောင်သာကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးထဲပါပါတယ်၊ ဒါက လူပုံကို ရိုက်တာမှာပါ - ဒီနေရာမှာ နောက်ခံအလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုရင် Apple ရဲ့ Aperture ကို Software နဲ့ ပြင်လို့ရတာတွေက အသုံးဝင်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Indoor တွေ၊ Night Time Portrait တွေ... အကုန်လုံးမှာ အဲ့ဒီ Telephoto Lens ကြောင့် ပုံမှန် Primary Lens က ရိုက်တာထက် တဝက်ကျော် အလင်းဝင်တာဆုံးရှုံးပါတယ်။ အဲ့တော့ ဓါတ်ပုံတွေက ပိုမှောင်လာတယ်။ အဆုံးသတ်က Low Light Portrait အတွက် iPhone XS ကို ဘယ်လိုမှ သိန်း ၂၀ ဖုန်းဆိုတာ မြင်ရက်စရာမရှိတာပါ။
ဒါတင်လားဆိုတော့ နောက်တစ်ခုမှာပါ ထိခိုက်ပါတယ်။ AI မပါတော့ဘဲ Hardware ဖြစ်တဲ့ Secondary Lens အကူအညီနဲ့ Background Information ကို ယူတဲ့အတွက် Object Portrait တွေမှာ တော်တော်လေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာပါတယ်။ Edge Detection တွေက အကောင်းဆုံး Flagship ဖုန်းတစ်ခုအတွက် အဆင်ပြေသင့်တဲ့ Backlit Environment မှာ ဖန်ခွက်လိုမျိုးအရာကိုတောင် မှန်အောင်မဖြတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ It's just BAD.
အဲ့တော့ ဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲ? ပြောသလို Pixel2ကလွဲရင် iPhone XS မှာ သူ့ကို မှီနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမရှိသလောက်ပါ။ Galaxy Note9ကတော့ Image Quality အရ နည်းနည်းလေးနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် Super Slow-Motion Video တွေနဲ့ တခြား Variable Aperture လိုမျိုးတွေမှာ သာနေသေးတယ်။ အဲ့တော့ iPhone XS က Point & Shoot ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် GN9 ရဲ့ Manual Mode တွေနဲ့ Feature တွေကို ယှဉ်မယ်ဆို ဒါကတကယ်ကိုခက်တဲ့ A+ အဆင့် စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေပါ။
Pixel2က တစ်ဆင့်ပိုပြီး A++ ဖြစ်သွားတာက လွဲရင်ပေါ့။
Selfie ကောင်းလာတယ်... ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးမဟုတ်။
ရိုးရှင်းတာတစ်ခုနဲ့ပဲ ရပ်ပါမယ်။ Galaxy Note9နဲ့ iPhone XS အတူရှိနေတယ်... ဒါပေမယ့် iPhone XS က ဒီ ၁၀ ရက်ကျော်လောက် တကယ်ကို Daily Driver အနေနဲ့ သုံးရတာစိတ်ကျေနပ်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုပါ။ Maybe, one hand usage ပိုကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်မယ်၊ Maybe, Speaker ပိုကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်မယ်၊ Maybe, User Experience ပိုကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်မယ်၊ Maybe, Build Quality က ကိုင်လိုက်တာနဲ့ Premium ဆန်နေတယ်ဆိုတာ သိသာနေတာကြောင့်ဖြစ်မယ်... .
ဒါပေမယ့် သေချာတာက iPhone XS (အထူးသဖြင့် ဒီရွှေရောင်) က ဒီလတွေ၊ နှစ်တွေထဲမှာ တော်တော်လေးကို ကိုင်သုံးရတာပျော်တဲ့ ဖုန်းတစ်ခုပါ။ အားနည်းချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် မနှစ်က iPhone X ထက် မသိသာတဲ့အရာသေးသေးလေးတွေမှာ Improve ဖြစ်လာတော့ တကယ်ကို ကျွန်တော်တို့လို အပြစ်ရှာတဲ့သူတွေအတွက်တောင် သုံးရတာပျော်လာတဲ့ဖုန်းတစ်ခုအဖြစ် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
Well, let's move to Galaxy Note9then.
Posted by Alex Aung at 5:19 AM